Teknụzụ Ọgbara ọhụrụ nke Na - eme Ka Ahịa Digital Digital | Martech Zone
Mgbe ụfọdụ okwu mmeghasị nwere echiche na-adịghị mma. Ekwetaghị m na ahịa dijitalụ taa na-akụghasị site na teknụzụ ọ bụla, ekwere m na ọ na-emewanyewanye ya.
Ndị na-ere ahịa na-agbanwe ma nabata teknụzụ ọhụụ na-enwe ike ịhazi, itinye aka, ma jikọọ na atụmanya ha na ndị ahịa n'ọtụtụ ụzọ bara uru karị. Oge ogbe na mgbawa na-agbanwe n'azụ anyị ka sistemụ dị mma na ịche na ịkọ omume nke ndị ahịa na azụmaahịa.
N'ezie, ajụjụ bụ ma ọ ga-eme n'oge. Dijitalụ bụ ọwa dị ọnụ ahịa dị oke ọnụ nke na omume adịghị mma na-eji ihe nzuzo ndị ahịa eme ihe na-eme mkpọtụ n'ihu ha ma ha nwere ike ịnọ na mkpebi mkpebi ma ọ bụ na ha anọghị. Ka anyi nwee olile anya na onodu ochichi enweghi ike iwe iwe na ulo oru nwere ike iru oru iwelata mmekpa aru n'onwe ha. Ekwetaghị m na nchekwube na ọ ga-eme, n'agbanyeghị.
Dị ka World Economic Forum si kwuo, isi ihe anọ na-akpata mgbanwe ndị a bụ ịgbasawanye mkpanaka, igwe ojii, Mgbakọ ọgụgụ isi (AI), na Internet-of-Things (IoT). Agbanyeghị, ọhụụ dị ka Big Data na Virtual Reality (VR) ga-agbanwe ihu igwe karịa.
Akuko Economic World
A na-atụ anya na teknụzụ ọhụrụ ndị a na-eweta njikọta na ụwa site na ọtụtụ ntụpọ, nke pụtara na ndị dike ịntanetị agaghị enwekwa ike ịchịkwa data ndị ahịa ọzọ. Nke ka mkpa bụ na ọ ga - enyere ndị na - azụ ahịa aka ịmepụta mgbasa ozi zuru ezu na ebumnuche n'ọdịnihu.
Spiralytics tinyere akwụkwọ a dị oke egwu, Nkà na ụzụ ọhụrụ na-emebi Digital Digital, nke ahụ kọwapụtara 10 nke teknụzụ ndị na-eme mgbalị anyị, na-agbanwe agbanwe nke ahịa dijitalụ.
Big Data - Teknụzụ igwe ojii meghere ibo ụzọ maka obere na obere ụlọ ọrụ iji kpokọta oke data nke ndị ahịa, na akụkụ ya na-enye nnukwu data. Corlọ ọrụ nke oge a maara nke ọma banyere ndị ahịa karịa ka ọ dịtụrụla, na-enyere ha aka ịmepụta mgbasa ozi ezubere iche na ahaziri iche.
Ngwukota artificial (AI) - ezi uche na ntụgharị uche nke etinyere na kọmpụta na usoro algorithmic na-ejide nkwa nke ime ngwa ngwa, mkpebi ahịa na amụma ziri ezi na amụma. Nke a ga-eme ka ụlọ ọrụ anyị mepụta ihe.
Igwe ihe igwe - ọgụgụ isi na nchịkọta ndị nwere ọgụgụ isi nwere ike igbu ma nwalee ọtụtụ nde data iji nyere ndị na-ere ahịa aka n'ịgbanwe na ịkwalite mkpọsa ha n'oge.
Bots - Chatbots bụ ụzọ dị ọnụ ala ma na-agbanwe agbanwe maka ụdị iji melite ọrụ ndị ahịa n'ihi na ha nwere ike ịnye azịza metụtara data ngwa ngwa wee rịọ arịrịọ. Ọ nwere ike ịbanye n'ime mkpokọta weebụ, ngwa, ma ọ bụ usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ma nwee ike ịnakọta ozi iji jiri usoro azụmaahịa.
Nchọta olu - a na-eji sọftụwia olu ugbu a karịa mgbe ọ bụla ịchọ, gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 1/3 nke nchọgharị Google ijeri 3.5 na-eme kwa ụbọchị. Ngbanwe a nwere ike ịkwalite usoro ịkwụ ụgwọ na usoro ọchụchọ maka ọdịnihu.
Virtual Adị na kwadokwara ọkpụkpọ òkù Adị - AR na VR na-enye visceral na-anwale tupu ị na-azụta ahụmịhe ndị ahịa, na-enye ha ohere inyocha ngwaahịa, soro ụdị ahụ, ma zụta n'otu oge-ọbụnadị na-eme ka ha gabiga ọtụtụ echiche na mmetụta uche.
Ihe Ntanetị (IoT) na Wearables - Nbawanye nke ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ ejikọrọ ga-ebute web nke ihe jikọrọ nke ndị ahịa nwere ike ijikọ iji mụta ozi ndị ahịa, gụnyere ihe ndị masịrị ha na ihe ndị na-adịghị ha mma.
ngọngọ Chain - Ndị ahịa nwere ike iji ngọngọ iji soro ma mee ka ndị na-ege ntị tinye aka na mgbasa ozi.
Mgbama - duru ahịa na teknụzụ ahịa dị nso, na-eche 65% ma na-akụ WiFi na NFC. Ejila ihe dị ka akara ngosi 14.5 dị ka nke 2017 wee nwee ike kụrụ nkeji nde 400 a tụrụ anya ya na 2020.
5G - 5G na-abawanye ụba dị iche iche, nchịkọta nke ndị na-ebu ibu, na ịkpụpụta ya na ikike ịdebe nwere ike melite ngwa ngwa na arụmọrụ, ma nye 100 njikọ ngwa ngwa karịa 4G na njedebe site na ihe ruru ise.
Tags: Amamịghe echichennukwu databotsiotteknụzụ ọgbara ọhụrụmmemmespiralyticsvirtual eziokwu